CARROT Mamiriro ekunze anovandudzwa uye inounza iwo XL majeti eiyo iPadOS 15 | IPhone nhau
CARROT Mamiriro ekunze anovandudzwa uye inounza iwo XL majeti eiyo iPadOS 15
Ngirozi Gonzalez | 21/09/2021 20:00 | IPhone maapplication
Nyowani Mamiriro ekunze app ye iPhone yasvika neIOS 15. Neiyi nyowani nyowani kugadziriswazve kwechiratidzo kunowedzerwa pamwe nehuwandu hweruzivo rwekuwedzera rwakarongedzwa mune dzakasiyana quadrangular zvinhu. Uye zvakare, iOS 15 uye iPadOS 15 dzinosanganisira zvimwe zvitsva zvakaita sekuuya kweXL widgets kuIpad, chimwe chinhu chakange chatorasikirwa muIOS 14. CARROT Mamiriro ekunze chirongwa chakasiyana kutarisa mamiriro ekunze uye yakagadziridzwa kuita vhezheni 5.4 ichichinjira kune zvitsva zveesisitimu nyowani dzekushandisa. Pakati pezvinhu izvi zvitsva pane XL widgets, nyowani madingindira, uye mitsva mifananidzo.
CARROT Mamiriro ekunze anotangisa ayo vhezheni 5.4 kuenderana neIOS 15 uye iPadOS 15
CARROT Mamiriro ekunze ane simba rinotyisa (uye zvakavanzika-zvekuziva) mamiriro ekunze anonopa zvirevo zvinomonyoroka.
Nyowani mushanduro 5.4 yeCARROT Mamiriro ekunze anosanganisira kusvika kweiyo Makuru majeti kune iyo iPad ine iPadOS 15. Kune maviri majeti: 'My Forecast' uye Mepu dzinotora mukana weiyo hombe skrini kuti ipe yakakodzera data. Nekudaro, iyo yePrimiyamu nhengo inodiwa kutenga yepashure dhata yekuvandudzwa, uye iyo Mepu widget inongowirirana chete neiyo Premium Ultra nhengo.
Ivo vakawedzerwawo mitsva yetsika nemitambo yekumashure, tsika mifananidzo uye akasiyana mavara. Kugadzirisa iyi mitezo mitsva inhengo yeClub Premium inodikanwa. Kuenderera mberi nezvidhori, zvakawedzerwa matatu matsva emifananidzo iyo inogona kushandurwa kubva kuCARROT Mamiriro ekunze.
Kuenderera mberi nenhau dzakabatana nenhengo yeClub Premium, yakaunzwa kugadzirisa zviziviso zve 'zvakakosha' kana 'zvine njodzi' zviziviso zvekukuvara yenzvimbo yekuzivisa. Uye zvakare, inosvitswawo kusangana kutsva kwakangwara muWatchOS, yakafanana neruzivo rwatinokwanisa kuwana kubva kuapp. Aya marongero anogona kushandurwa kubva kuApple Watch app pane iyo iPhone.
Pakupedzisira, ivo vanoziviswa zvitsva zvitsva zvine mamiriro ekunze ekufungidzira, horauta fungidziro uye fungidziro yezuva nezuva. Nzira nyowani dzekududzira data dzinounzwa nezvakamboita mifananidzo.
CARROT Mamiriro ekunzevakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » CARROT Mamiriro ekunze anovandudzwa uye inounza iwo XL majeti eiyo iPadOS 15
Apple inoburitsa beta 1 shanduro dzeIOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1 uye tvOS 15.1